Don’t forget callback | Saturngod
ဖြစ်သင့်တာက အဲဒီလို ကိစ္စမျိုးမှာ loop မဝင်ခင်မှာ length ကို အရင် စစ်ပြီးတော့ မရှိဘူးဆိုရင် callback ပြန်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီ တစ်ကြောင်းလေးအတွက် ကျွန်တော့်မှာ အချိန် ၂ နာရီလောက် ပေးလိုက်ရတယ်။ Expressjs ကို သုံးပြီး module တွေ ခွဲရေးရင် callback ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ အတွက် ပိုစဉ်းစားဖို့ လိုတယ်။ နောက်ပြီး အရင်ကလို ဒါပြီး ဒါလာ ဆိုပြီး ခေါ်လို့မရတော့ဘူး။ ဘာ ပိုကောင်းသလဲဆိုရင်တော့ data တွေ insert ထည့်တဲ့ အခါ နောက်ပြီး result တွေ အများကြီးကို loop ပတ်ပြီး တစ်ခုခြင်းစီ စစ်ရတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ရေးရတာ ပိုရှင်းတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ် ကျော်ကျော်လောက်က prototype တစ်ခု ဆောက်ဖူးသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် Node.js ကို အဲဒီတုန်းက လက်လျော့လိုက်ရတယ်။ Async ကို ဘယ်လိုမှ မစဉ်းစားတတ်လို့။ sync စဉ်းစားပုံ အတိုင်း တစ်ဆင့်ခြင်း ဆီ စဉ်းစားပေမယ့် မရတာတွေ ရှိတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ PHP ထက် Node.js ကို ပိုသဘောကျနေတာ အမှန်ပဲ။ MySQL ထက် Mongodb ကို ပိုသဘောကျတယ်။ prototype အသေးစားလေးတွေ ကို ဖန်တီးရာမှာ Node.js + mongodb က မြန်မြန်ဆန်ဆန် လေး ရေးလို့ရတာကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged callback, mongodb, node.js on December 23, 2012 by saturngod. Post navigation
Mahabote Android Version update →
4 thoughts on “Don’t forget callback” Ye Myat Min January 20, 2013 at 6:41 pm Regarding Async flow, this library has helped mealot.
Asyncjs – https://github.com/caolan/async
You should definitely check it out. It includes really useful controls like parallels, waterfall and etc.
There are also similar libraries (e.g. Step) but Async is the most comprehensive in my opinion.
Step – https://github.com/creationix/step
Reply ↓ saturngod Post authorJanuary 21, 2013 at 2:30 pm Oh! I forget about async library. A bit lazy to use external library Reply ↓ Ye Myat Min January 23, 2013 at 6:44 pm Libraries were created to cure laziness in all of us, no? And you’re lazy to usealibrary? Hahha.
Reply ↓ saturngod Post authorJanuary 23, 2013 at 8:47 pm the problem is I lazy to learn how to use Reply ↓ LeaveaReply Cancel reply